IVirgo Man kunye neTaurus Woman ixesha elide ukuhambelana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IVirgo Man kunye neTaurus Woman ixesha elide ukuhambelana
Indoda yeVirgo kunye nomfazi waseTaurus bafana ngokufanayo malunga nendlela abajonga ngayo ebomini, kwaye oku kuthetha ukuba banokuba nolwalamano oluhle kakhulu.
Ukubonisa uzinzo kunye nokukhuseleka, aba babini banazo ezi mpawu, ndingasathethi ke ukuba bayakuxabisa kangakanani ukuzibona omnye komnye. Kodwa into yokuba egxeka kwaye unenkani ivelisa iingxaki ezininzi ebomini babo njengesibini.
Iikhrayitheriya IVirgo Man Taurus yesiDanga sokuNgqinelana kwabafazi
Ukusuka kwiindawo ezininzi zokujonga, ubudlelwane bendoda yaseVirgo yindoda yaseTaurus yinto efanelekileyo kakhulu. Uya kuthanda ukuba akwazi ukunxibelelana naye ngokwasengqondweni, ngelixa yena eza kumthanda ngenxa yokuba esebenza kwaye ephantsi.
Umfazi waseTaurus unomdla kwaye unengqiqo. Unokuyilukuhla indoda eyiVirgo ngomzuzu. Unonophele kakhulu umvumela ngaphakathi komphefumlo wakhe, ngakumbi xa edibana nomntu omtsha.
I-Virgos ine-intuition eyomeleleyo kwaye unokuqikelela iinjongo ezimbi zomntu ukusuka kwimayile enye. Kunokuba nzima ukufumana ukuthembela kwale ndoda yeVirgo, kodwa kwakamsinya nje ukuba yenziwe, uya kuba mnandi.
Umfazi waseTaurus waziwa njengelinye lawona manenekazi anezigulana kwi-zodiac. Uya kulinda unyaka wonke ukuba amfumane ukuba uyathandana. Ungayichazanga eyokuba uneempawu ezikufutshane nendoda yamaphupha akhe.
Ngelixa ingeyonto indala njengaye, indoda yaseVirgo ihlawula ingqalelo enkulu ukuba itshata nabani. Ujonge ukhuseleko ngaphezu kwayo nayiphi na enye into xa ukhetha iqabane. Kwaye uya kuyifumana kwinkazana yeBull, ethi, ngaphezu kwayo nantoni na, ifuna ubudlelwane bexesha elide.
hlukana nomntu we-aquarius
Bobabini banonophele kakhulu kwimali yabo, besenza utyalomali ngekamva kwaye hayi okomzuzwana. Indoda yaseVirgo iya kuyithanda injongo yomfazi waseTaurus. Uyakumthanda ngokuba krelekrele.
Kodwa ezi zizinto ezingafanele kukothusa mntu. Ezi zimbini zinezinto ezininzi ezifanayo kunokuba zahlukile.
Indoda yeVirgo ayinguye kwaphela umntu onengqondo, ke uya kucaphuka xa ebona umfazi wakhe waseTaurus ephantsi kwayo.
Yonke into efunwa yiVirgo kukuba yinkonzo kwaye izise ukugqibelela xa izinto zinesiphithiphithi kwaye zingasasebenzi. Bobabini bathanda ukuzahlula kwihlabathi xa bejongana nengxaki.
Uphawu lweZodiac ngoFebruwari 12
Uya kuthandana nomntu wasetyhini anokuxhomekeka kuye. Kwaye oyena mfazi uthembekileyo kwi-zodiac ngumfazi waseTaurus. Uya kuxhomekeka kakhulu kumagama, ke kuya kufuneka alumkele into ayithethayo emngqongile.
Ebhedini, aba babini baya 'kudlana' ngokulula. Unomzimba, unomdla omkhulu kwiinkcukacha. Kwaye oku kuthetha ukuba ubulili obukhulu. Ngelixa isenokungabi sesona sibini sinomdla kakhulu, aba babini baqinisekile ukuba banokuhlala ubomi kunye.
Ngelixa umfazi waseTaurus kunye nendoda eyiVirgo bobabini bemiqondiso yoMhlaba, uyatshintsha kwaye uzinzile. Oku kuthetha ukuba inenekazi laseTaurus luthiyile utshintsho ngaphezu kwayo nayiphi na enye into, kwaye indoda yaseVirgo iyaziguqula ngokulula nakweyiphi na imeko yabantu.
Kodwa unokuzibhubhisa, kuba uyazigxeka kwaye akanakho ukuzithemba. Unokunceda kule meko ngokumkhuthaza ukuba akholelwe ukuba ulungile kuyo yonke into ayenzayo. Kwaye uya kuzithemba izimvo zakhe ngokunyanisekileyo.
Akayi kuqala ukuziva ngcono ngaye emva kwengxoxo kunye nomfazi waseTaurus, uya kuqala ukujonga ihlabathi lonke ngendlela efanelekileyo. Kodwa ngaphambi kokuba bafikelele kweli nqanaba, baya kudlula kwiingxabano ezininzi.
Akayi kuyithanda inkani yakhe, kwaye uya kuba namaxesha apho engasayi kuba nomonde ngeendlela zakhe zokugxeka.
Unamaxesha amnyama xa enika ukuzisizela. Ke ngoko, eli nenekazi liya kuhlala lifuna umntu onokumenza azive enethemba kwaye enethemba.
ukuhambelana kwehagu nehashe
Iimpikiswano phakathi kwabo ziya kuvela kuphela ngenxa yokuba uhlalutya kakhulu kwaye ugxeka wonke umntu nayo yonke into, kwaye ngenxa yokuba unomnini kwaye unenkani.
Baya kuba belungile logama nje bengakhange bajonge ukulawula omnye komnye. Ukuvuma ukungavumelani ngamanye amaxesha sesona sisombululo sisiso kwesi sibini sikhulu.
Ngenxa yokuba bethandana ngokungathandabuzekiyo, indoda eyiVirgo kunye nomfazi waseTaurus banokuphela betshatile. Ixesha liya kwenza kuphela ubudlelwane babo bube mnandi. Umzuzu ngamnye aba bachitha kunye baya kukhunjulwa kwaye baya kukhunjulwa ngonaphakade
Bazimisele kakhulu ukuba kwinkampani yomnye nomnye, abasayi kuphinda bafune omnye umntu okubajikelezile. Olu luhlobo lwesibini apho amaqabane ahamba ngesandla-esitratweni.
Uya kuba nenkathalo, akazukuba nengxaki kumaxesha anzima. Naye ngeenxa zonke, uya kufunda uphumle kwaye ungabi naxhala kangaka. Xa eza kumbona ezinikele kwaye ezinikele, uya kuba ngoyena wonwabileyo.
Indoda yaseVirgo iya kubonelela ngomfazi wayo waseTaurus yonke into ayifunayo ukuze onwabe. Banokuba nesiqalo esinzima, kuba kuya kufuneka alungelelanise isantya sakhe ukuze simfanise nesakhe, kodwa baya kulunga.
Iingxaki zakhe zeemvakalelo ziya kuba lula ngokubakho komfazi omnye, eyiTaurus. Ngaphandle koko, uya kwenza indoda enomdla ngakumbi kuye.
Aba babini bayafana nakwindlela abachitha ngayo imali. Ungayichazanga eyokuba bobabini babaluleke kangakanani kubudlelwane bezothando. Ukusebenza njengezikhokelo omnye komnye, baya kuhlala besazi ukuba leliphi icala ekufuneka balithathe ebomini.
Ukuba ngamaqabane eshishini, baya kuba nempumelelo kwaye babe nenzuzo. Baya konwaba kakhulu njengabathandi, kodwa abantu baya kubabona betha kade kuba bengangxami ngezigqibo. Abantwana babo baya kuba bahlakaniphile kwaye banakekelwe kakuhle, kuba uyondla kwaye uthanda ukugqibelela.
Gcina ukhumbula ukuba le yeyona indibaniselwano ilungileyo yomtshato. Zombini iVirgo kunye neTaurus ngabasebenzi abakhutheleyo, ke baya kuba nemali eyoneleyo yokufumana izinto ezininzi zexabiso.
Iingcebiso zokugqibela zeVirgo Man kunye neTaurus Woman
Ngelixa indoda yaseVirgo inokutshintsha kwaye ibe njengoko iimeko zifuna njalo, umfazi waseTaurus uluthiyile utshintsho. Ngenxa yokuba egxeka kakhulu, angathetha kakhulu ngeziphene zakhe. Kuyacetyiswa ukuba indoda yaseVirgo ayikhankanyi inyani yokuba umfazi wayo waseTaurus alibazise.
Kuya kufuneka amncede acinge ngakumbi ngentloko yakhe hayi ngentliziyo ukuba ufuna ukuba afezeke. Ngenxa yokuba unenkani kakhulu, umfazi waseTaurus angalonakalisa unxibelelwano phakathi kwakhe nendoda yakhe yeVirgo.
Uphawu lweZodiac ngoMatshi 15
Kungenxa yoko le nto kufuneka emamele into ayithethayo rhoqo kuba angatsiba ukuza nolwakhe uluvo kwaye ayonakalise yonke incoko.
Ubudlelwane kunye nendoda eyiVirgo inokuba yeyaseZulwini okanye isihogo sokwenyani. Kuye kuye ukuthatha isigqibo sokuba uya kuba ngubani: iqabane elicelayo elenza isithandwa sakhe senze zonke izinto, okanye inkwenkwe eneentloni kwaye igcinwe ishushu kwaye intle?
Umfazi waseTaurus unomonde, ke uya kumlinda ukuba atyhile ubuso bakhe bokwenyani. Eyona ngxaki iphambili phakathi kwezi zimbini kukuba enye ingumqondiso onokuguquguquka kwaye enye ilungisiwe.
Uya kuhlala efuna ukudibana naye xa besilwa. Kodwa uya kuchasa ngokupheleleyo esi sicwangciso. Inkani yakhe inokudina kakhulu.
Lilonke, ulwalamano lomfazi we-Virgo-Taurus luyakuba yinkanuko kwaye lube nempumelelo. Zombini zijolise kusapho, kwaye bazakusebenza nzima ukuze usapho lwabo lonwabe kwaye luzaliseke. Kodwa abayi konwaba kakhulu kwaye abayi kuzenzela ngokwaneleyo.
Kwimeko apho baziva ukuba ubudlelwane babo ngumsebenzi omninzi, ingangumbono olungileyo ukuyeka ukuzama ukuba sisibini. Obu budlelwane obumele busebenze bodwa.
IVirgo Soulmate: Ngubani Olilungu loBomi babo?
Ukuhambelana kweTaurus kunye neVirgo kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Umfazi weTaurus kunye nezinye iimpawu
Nge-6 kaSeptemba iZodiac yiVirgo-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Nge-20 kaJuni iZodiac yiGemini-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Iqhude indoda kunye nenamba umfazi ukuthanda ukuhambelana
yintoni umatshi 28 uphawu lweenkwenkwezi
Leo indoda kunye ne-aquarius woman
i-taurus yowasetyhini kunye ne-virgo eyindoda
loluphi uphawu lwango-Okthobha 3